News Collection: तान्यो अमेरिकाले
'अमेरिकामा कसरी दसैं मनाउनुभयो ?' गायक उदेश श्रेष्ठले गायिका अञ्जु पन्तका श्रीमान् गायक मनोज राजसँग फेसबुकको वालमा यही प्रश्न सोधे । मनोज राजको जवाफ थियो— 'अमेरिकामा खसी त खाइयो तर स्वाद पाइएन । टीका त लाइयो तर जमरा लाइएन । रक्सी पनि पिइयो तर मात्न पाइएन...हा हा हा ।'
उदेशले फेरि सोधे, 'अनि नेपाल फिर्ती सवारी कहिले नि ?' मनोज राजको जवाफ थियो— 'सायद चाँडै आउँछु, हुन सक्छ आगामी फेब्रुअरी -फागुन) मा...।' सांगीतिक कार्यक्रमका क्रममा श्रीमती गायिका अञ्जु पन्तसँगै अमेरिका पुगेका गायक मनोज राज अहिलेसम्म उतै छन् । अञ्जु भने आफ्नो निर्धारित कार्यक्रमपछि स्वदेश फकिर् सकेकी छिन् । अमेरिकाका विभिन्न सहरमा सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर गायिका अञ्जु पन्त स्वदेश फर्किएको लामो समय भैसक्दासमेत उनका श्रीमान् मनोज राज उतै अड्किएका छन् । मनोज राज तीन महिनाको भिसामा अमेरिका गएका हुन् ।
नेपाल टेलिभिजनको लोकपि्रय हास्यश्रृंखला 'तीतो सत्य' का दीपकराज गिरी तथा दीपाश्री निरौलाको नेतृत्वमा अमेरिकामा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूले असाध्यै मन पराए । कार्यक्रमकै क्रममा दीपक-दीपाले तीतो सत्यका केही श्रृंखला अमेरिकामै छायांकन गर्नसमेत भ्याए । दसैंअघि दीपक-दीपा स्वदेश फर्किएर आफ्नो नियमित कार्यमा व्यस्त भैसकेका छन् तर उनीहरूसँगै अमेरिका जाने कतिपय कलाकार अमेरिकामै रोकिएका छन् । 'तीतो सत्य म्युजिकल नाइट' मा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका आधाभन्दा बढी कलाकार उतै रोकिएपछि अहिले यो विषय अनलाइन सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको छ ।
गायक यम बराल, जगदीश समाल, नायिका रञ्जना शर्मा, हास्यकलाकार गोपाल अधिकारी 'ट्वाकेन्द्र' आदि कलाकार कार्यक्रम सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दासमेत स्वदेश नफर्किएपछि उनीहरू अमेरिकामै पलायन भएको चर्चा चल्न थालेको हो ।
यसअघि अमेरिका गएर फर्किने गरेका गायक यम बराल यसपटक भने त्यहाँ पुगेको तीन महिना बितिसक्दासमेत स्वदेश फर्किएका छैनन् । करिब दुई महिना सक्रिय रू पमा सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएका गायक बराल हालसम्म स्वदेश नफर्किएकाले उनी पनि उतै बसेको अनुमान गर्नेहरू प्रशस्त छन् । नेपाली सुगम संगीतका एक स्थापित नाम यम बराल अमेरिकामै बसिरहनुलाई उनका समकालीन गायकहरूले समेत अनौठो मानेका छन् । 'यमको भविष्य नेपालमै छ,' एक जना गायकको प्रतिक्रिया थियो— 'ढिलो-चाँडो ऊ नेपाल र्फकन्छ ।'
यम बरालभन्दा केही अघि अमेरिका पुगेका लोकपि्रय गायक जगदीश समाल अहिले अमेरिकामै रमाइरहेका छन् । जगदीश अमेरिका उडेको केही दिनपछि नै उनका समकालीन गायक भन्दै थिए— 'मोटरसाइकलसमेत बेचेर गएकाले जगदीश पनि उतै बस्ने सम्भावना छ ।' अमेरिका पुगेको चार-पाँच महिना बितिसक्दासमेत स्वदश नफर्किएका जगदीशले पनि आफ्ना अग्रज गायक-गायिकाकै सिको गर्ने पक्का छ । नेपाली गजल गायनमा स्थापित भैसकेका गायक समालको अमेरिका पलायनले नेपाली सांगीतिक क्षेत्रले एउटा प्रतिभाशाली गायक गुमाएको छ भन्नेहरू पनि प्रशस्त छन् ।
नायिका रञ्जना शर्मा पनि सांस्कृतिक कार्यक्रमका क्रममा अमेरिका पुग्ने नेपाली कलाकार हुन् । गत दसैंसम्ममा स्वदेश र्फकने बताइए पनि रञ्जना तिहार लागिसक्दासमेत स्वदेश फर्किएकी छैनन्, अन्य कलाकारझैं रञ्जनाले पनि अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि आवश्यक पर्ने गि्रनकार्ड प्राप्त गर्न कानुनी प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको बताइन्छ ।
गत साउन महिनामा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गर्न तीतो सत्यको समूहसँग पहिलो पटक अमेरिका पुगेका ट्वाकेन्द्र उक्त श्रृंखलाका निर्माण नियन्त्रक पनि हुन् । ट्वाके न्द्र अमेरिकामै बस्ने आशयको समाचार केही अघि एउटा अनलाइन पत्रिकामा समेत प्रकाशित भएको थियो । समाचारमा लेखिएको छ— 'लोकपि्रय टेलिचलचित्र 'तीतो सत्य'का ट्वाकेन्द्र अर्थात गोपाल अधिकारी अब नेपाल र्फकनेछैनन् । सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि अमेरिका पुगेका उनी अमेरिकामै लुकेका छन् । उनीसँगै अमेरिका पुगेका दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला भने स्वदेश फर्किसकेका छन् । 'तीतो सत्य' बाट सानो पर्दाको कमेडियनका रूपमा चर्चा बटुलेका ट्वाकेन्द्र कलाकार भिसामा अमेरिका उडेका थिए । अमेरिकामै खिचिएको 'तीतो सत्य' को श्रृंखला भने यसअघि नै प्रसारण भैसकेको छ, जुन कन्सेप्टमा ट्वाकेन्द्रसहित दीपकराज र दीपाश्रीले पनि अभिनय गरे का छन् । ट्वाकेन्द्र अमेरिकामै लुकेको कुरा दीपकराजले गोप्य नै राखेका छन् ।'
पछिल्लो समयमा नाम चलेका, स्थापित तथा लोकपि्रय कलाकारहरू सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अमेरिका जाने तर स्वदेश नर्फकने क्रम बढिरहेको तथ्यलाई 'नेपालीको रेडियो ८८ दशमलव ८' का सञ्चालक तथा सञ्चारकर्मी सन्तोष भट्टराईले आफ्नो ब्लगमा समेत स्थान दिएका छन् । सञ्चारकर्मी भट्टराईले पछिल्लो समय अमेरिका पलायन भएका जगदीश समाल तथा यम बराललाई लक्षित गर्दै 'स्रष्टा बिदेसिने क्रम रोकौं' शीर्षकको लेख लेखेका छन् । लेख लेख्नैका लागि सञ्चारकर्मी भट्टराईले गायकद्वयसँग अमेरिकामै बसिरहनुको कारण सोधेका छन् । दुवै गायकले सञ्चारकर्मी भट्टराईलाई जवाफ दिए— 'नेपालमा नाम त कमाइयो तर दाम कमाइएन, त्यसैका लागि हामी अमेरिका पलायन भएका हौं ।' उनीहरूमध्ये एक जनाले भनेका छन्— 'नेपालमा गीत गाएर, बजाएर पेट पाल्न र घर धान्न सकिदैन रै'छ, पेट त पाल्नैपर्‍यो नि ! '
नेपाली कलाकारहरू अमेरिका पुगेर उतै स्थायी बसाबास गरेको यो प्रसंग नौलो भने होइन । पुराना गायक प्रेमराजा महतको पालादेखि नै यो प्रचलन प्रारम्भ भएको हो । एक तथ्यांकअनुसार संगीत तथा अभिनय क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी सेलिब्रेटी अमेरिकामा स्थायी बसोबास गरिरहेका छन् । सांगीतिक क्षेत्रतर्फ प्रेमराजा महत, सपनाश्री, हरिश माथेमा, सुनिल उप्रेती, सञ्जिप प्रधान, सरिष्मा अमात्य, दीपेशकिशोर भट्टराई, राजु लामा, कर्णदास, सृजन ताम्राकार, सुदीप गिरी अमेरिकामै बसेर संघर्ष गरिरहेका छन् । अभिनयतर्फका सरोज खनाल, पूजा चन्द, जल शाह, सारंगा श्रेष्ठ, सुधांशु जोशी, रमेश उप्रेती, रतन सुवेदी, अनुपमा कोइराला, रमित ढुंगाना, विक्रान्त बस्नेत पनि अमेरिकामै रमाइरहेका छन् ।
अमेरिकामा रोजगारीको माग
अमेरिका सधंै बाँकी विश्वका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ। गैरकानुनी रूपमा बस्न मिल्ने तथा सामान्य अंग्रेजी जानेकाहरूले समेत प्रशस्त अवसर पाउने भएकाले पनि अमेरिका रोजगारीको पहिलो छनोटमा पर्छ।
अमेरिकाको रोजगार तथ्यांक विभाग -ब्यूरो अफ लेबर स्ट्याटिक्स) ले हालै अमेरिकामा आगामी वर्षहरूमा चाहिने रोजगारी तथा रोजगारदाताहरूको लामो सूची प्रकाशित गरेको छ। तथ्यांक विभागका अनुसार सन् २०१८ सम्ममा अमेरिकामा १ करोड ५३ लाख कामदारको आवश्यकता हुनेछ। यो आवश्यकता रोजगारीको नयाँ अवसर र हाल कार्यरत कामदारहरूको स्वैच्छिक अवकाश एवं निवृत्तिभरणले सिर्जना गरेको हो। त्यसबाहेक यो संख्या देशको आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन समेत रोजगारदाताहरूको आवश्यकता हुनेछ। तथ्यांक विभागले नयाँ कामदार आवश्यक पर्ने क्षेत्र तथा संख्याको लामो सूची नै निकालेको छ, जसबाट रोजगारीका केही क्षेत्र र कामदारको संख्या यहाँ प्रस्तुत छ।
२००८ मा कार्यरत ः २६ लाख २० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ३२ लाख
पारिवारिक स्वास्थ्य सल्लाहकार
२००८ मा कार्यरत ः ९ लाख २२ हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १३ लाख ८० हजार
कस्टमर सर्भिस रिप्रेजेन्टेटिभ
२००८ मा कार्यरत ः २२ लाख ५० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः २६ लाख ५० हजार
कम्बाइन फुड पि्रपरेसन, सर्भिङ वर्कर
२००८ मा कार्यरत ः २७ लाख
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ३० लाख ९० हजार
पर्सनल एण्ड होम केयर एडि्स
२००८ मा कार्यरत ः ८ लाख १७ हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ११ लाख ९० हजार
रिटेल सेल्स पर्सन
२००८ मा कार्यरत ः ४४ लाख ९० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ४८ लाख ६० हजार
अफिस क्लर्क, जनरल
२००८ मा कार्यरत ः ३० लाख २० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ३३ लाख ८० हजार
एकाउन्टेन र अडिटर
२००८ मा कार्यरत ः १२ लाख ९० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १५ लाख ७० हजार
२००८ मा कार्यरत ः १४ लाख ७० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १७ लाख ५० हजार
२००८ मा कार्यरत ः १६ लाख ९० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १९ लाख ६० हजार
२००८ मा कार्यरत ः १२ लाख ५० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १५ लाख
इलिमेन्ट्री स्कुल टिचर
२००८ मा कार्यरत ः १५ लाख ५० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १७ लाख ९० हजार
ट्रक ड्राइभर, हेभी एन्ड ट्रयाक्टर ट्रेलर
२००८ मा कार्यरत ः १७ लाख ९० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः २० लाख ३० हजार
ल्याण्ड स्केपिङ एण्ड ग्राउन्ड किपिङ वर्कर
२००८ मा कार्यरत ः १२ लाख १० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १४ लाख २० हजार
बुक किपिङ, एकाउन्टिङ र अडिटिङ क्लर्क
२००८ मा कार्यरत ः २० लाख ६० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः २२ लाख ८० हजार
एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन असिस्टेन्ट
२००८ मा कार्यरत ः १५ लाख ९० हजार
२००८ मा कार्यरत ः ७ लाख ४७ हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ९ लाख २५ हजार
कम्प्युटर एप्लिकेसन सफ्टवेयर इन्जिनियर
२००८ मा कार्यरत ः ५ लाख १५ हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ६ लाख ९० हजार
रिसेप्सनिष्ट एन्ड इन्फर्मेसन क्लर्क
२००८ मा कार्यरत ः ११ लाख ४० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १३ लाख २० हजार
२००८ मा कार्यरत ः १२ लाख ८० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १४ लाख ५० हजार
२००८ मा कार्यरत ः ४ लाख ८४ हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ६ लाख ४८ हजार
फष्ट लाइन सुपरभाइजर
२००८ मा कार्यरत ः १४ लाख ६० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १६ लाख २० हजार
नेटवर्क सिस्टम एन्ड डाटा कम्युनिकेसन एनालाइसिस्ट
२००८ मा कार्यरत ः २ लाख ९२ हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ४ लाख ४८ हजार
प्राक्टिकल एन्ड भोकेसनल नर्स
२००८ मा कार्यरत ः ७ लाख ५४ हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ९ लाख ९ हजार
२००८ मा कार्यरत ः १० लाख ८० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १२ लाख ३० हजार
वेटर एन्ड वेट्रेस
२००८ मा कार्यरत ः २३ लाख ८० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः २५ लाख ३० हजार
मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर वर्कर
२००८ मा कार्यरत ः १३ लाख ६० हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १५ लाख १० हजार
फिजिसियन एन्ड सर्जन
२००८ मा कार्यरत ः ६ लाख ६१ हजार
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः ८ लाख ६ हजार
चाइल्ड केयर वर्कर
२००८ मा कार्यरत ः १३ लाख
२०१८ सम्ममा आवश्यक ः १४ लाख ४० हजार
२००८ मा कार्यरत ः १३ लाख १० हजार